ဆီးချိုအမျိုးအစား ခွဲခြားခြင်း | ဆီးချိုနှင့်ဆက်စပ်ရောဂါများ
ဆီးချိုအမျိုးအစား-၁ ဟူသည်မှာ ယခင်က ခေါ်ဝေါ်လာခဲ့ကြသော ကလေးဆီးချို (ချိုင်းဟုဒ်)¹*၊ လူငယ်ဆီးချို(ဂျူဗင်နိုင်း) ²*နှင့် အင်ဆူလင်မှီခိုဆီးချို³* ဟူသော စကားလုံးများကို အစားထိုးထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဆီးချိုအမျိုးအစား-၂ သည်လည်း ယခင်က ခေါ်ဝေါ်လာခဲ့သော သက်ကြီးဆီးချို¹** ၊ အ၀လွန်ဆက်နွှယ်ဆီးချို ²**၊ အင်ဆူလင် မမှီခိုဆီးချို ³**တို့ကို အစားထိုး ခေါ်ဝေါ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
စင်စစ် ၄င်းအမျိုးအစား နှစ်မျိုးအတွင်း အကျုံးမ၀င်သေးသော ဆီးချိုရောဂါများ ရှိသေးသော်လည်း ပညာရှင် အများအပြားလက်ခံနိုင်သော အနေအထားနှင့် အမျိုးအစားခွဲခြားရန် လောလောဆယ်မဖြစ်နိုင်သေးပါ။ သို့သော် ဆီးချိုကို လေ့လာနေသော ပင်ရင်းဋ္ဌာန အတော်များများကမူ အမျိုးအစား-၃ ကို ထပ်မံ သတ်မှတ်သည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဆီးချို***¹ ၊ အင်ဆူလင်မတိုးခြင်း ပေါင်းစပ်ပါဝင်နေသော ဆီးချိုအမျိုးအစား ၁ ***²၊ အင်ဆူလင်ထိုးရန်လိုသော ဆီးချိုအမျိုးအစား -၂ ***³ ၊ နှင့် ဆိုင်းငံ့ အော်တိုအင်မျူး ဆီးချိုရောဂါ *******တို့ကို ပေါင်းစပ်၍ ဆီးချို အမျိုးအစား -၃ ဟူ၍ သတ်မှတ်သည်။
ထို့ပြင် လူငယ်များတွင် ဖြစ်သော သက်ကြီးဆီးချို အမျိုးအစားလည်း ရှိသေးသည်။ အင်္ဂလိပ်ဆေးပညာစကားလုံးနှင့် MODY(maturity onset diabetes of the young) ဟုခေါ်ရသည်။ ယင်းမှာ မျိုးရိုးဗီဇနှင့် သက်ဆိုင်ပြီး ဂျင်းတစ်ခု ချို့ယွင်းသော ရောဂါဖြစ်သည်။ ယင်းရောဂါသည် မျိုးရိုးလိုက်ခြင်း သိသာစွာဖြစ်ပြီး အသက်သုံးဆယ် ကျော်လွန်သောအခါ ဆီးချို အမျိုးအစား-၂ ၏အနေအထား အတိုင်း ပေါ်ပေါက်လာသည်။
*pituitary gland; ဦးနှောက်အတွင်း တည်ရှိပြီး အလွန်အရေးကြီးသော ဟော်မုန်းများ ထုတ်လုပ်သော ဂလင်း တစ်မျိုး။
³*Insulin dependent diabetes mellitus(IDDM)
³**non-insulin-dependent diabetes mellitus (NIDDM)
***¹ gestational diabetes mellitus
***²insulin-resistant type 1 diabetes
***³type2diabetes which has progressed to require injected insulin
******latent autoimmune diabetes
ရောဂါ လက္ခဏာနဲ့ ဆိုင်တဲ့ အပိုင်းကျရင် လာဖတ်ဦးပေါ့ညီ။ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ မစိုးရိမ်ပါနဲ့။
မချိုသင်းရေ… စတမ်းဆဲလ်ကြီးအောင်မြင်ရင် ပျောက်အောင်ကုနိုင်မယ်ဗျ… ကျနော်လည်း နိုင်တဲ့ဘက်က ၀င်ကူတဲ့သဘောပါပဲ။ ဆီးချိုက အဖြစ်များလာတော့မဲ့ သဘောရှိတာကိုးဗျာ…လာလာဖတ်ပေးတာ ကျေးဇူးပါ။
ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ ရဲ့ ညီ မဟုတ်ဘူးကိုး။ အရင်ပို့စ်က ကွန်မန့်ပြန်ဖတ်မှ စာပြန်ထားတာ သိရတယ်။ ဆောရီးပါ ဆရာ။
ဟုတ်အကို ကျနော်စိတ်ဝင်စားပါတယ်..ဗဟုသုတလဲရပါတယ်..လာဖတ်နေအုံးမှာပါ အကို
ဆီးချိုကြောင့်ဖြစ်တာမျိုးက ဆီးအလွန်သွားတယ်။ ခဏခဏလည်းသွားတယ်။ မသွားဘဲလည်း မနေနိုင်ဘူး။ အကြိမ်ရေကော ဆီးပမာဏကော များတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ရေငတ်တတ်တယ်။ ရေထပ်ထပ်သောက်ရတယ်။ ရေသောက်တော့ ဆီးထပ်သွားတယ်။ ဒါမျိုးပါ။
အများစုသာမန်အားဖြင့်တော့ စိတ်ပင်ပန်းရင် ရေငတ်တယ်။ ရေသောက်တော့ ဆီးသွားတယ်။ မသွားချင်ရင်လည်း သုံးလေးနာရီ ထိန်းထားရင် ဖြစ်တယ်။ ထိန်းထားလို့ရတယ်။ ဒါကတော့ စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာပဲ။ ချင့်ချိန်နိုင်အောင်ပါ။
မှတ်သားစရာတွေပါ… အရင်က မက်မက်အမေလည်း အဲလိုပဲ… ညဖက် အိပ်လို့ မရဘူး.. ခဏခဏ နိုးတယ်.. ရေလဲ ငတ်တယ်… အပေါ့လည်း ခဏခဏသွားတယ်.. နောက်ပိုင်း လူက တဖြည်း ဖြည်း ပိန်ကျလာတယ်လေ… အဲဒါနဲ့ ဆရာဝန်ပြ.. ဆီးစစ် သွေးစစ်တော့ ဆီးချိုရောဂါ ရှိနေတာတဲ့…. အခုတော့ သူက ဆေးတွေ သောက်နေရတယ်လေ…. မေမေလည်း အခုမှ ဆေးနဲ့ တွေ့လို့လား မသိပါဘူး .. ပြန်ဝလာတယ်….. ဆီးချိုရောဂါကို ပျောက်အောင် လုပ်လို့ မရသေးဘူးလား ဦးရီးတော်…. နောက်ပိုင်း သူက မျိုးရိုးလိုက်တယ်ဆိုတာ ဟုတ်လား… 😦
အမျိုးအစားနှစ်မျိုးလုံးက အနည်းနဲ့အများ မျိုးရိုးလိုက်နိုင်တယ်။ ဆီးချို ၁ အတွက်ကိုတော့ ပျောက်အောင် ကုသလို့မရသေးဘူး။ အခု ဆီးချို ၂ နဲ့ပတ်သက်လို့ နည်းနည်းဖတ်ရတာက အ၀လွန်တဲ့ လူတွေမှာ အစာအိမ်ကိုချုံ့ပစ်တဲ့ ခွဲစိတ်မှု Gastric bypass procedures (GBP) ဟာ ဆီးချို ၂ ကို ပျောက်ကင်းသလောက်နီးပါး တတ်နိုင်ပြီး တော်တော်လေးကောင်းတယ်လို့ဆိုတယ်။
အသစ်အသစ်တွေကိုတော့ မယုံရဲသေးပါဘူး။ လောလောဆယ်တော့ အရှင်းမပျောက် နိုင်သေးဘူးပဲ မှတ်ထားတယ်။
အစ်မအလွန်စားချင်သော ရွှေပုဇွန်မလိုင်မုန့်လက်ဆောင်ရလာပြီလေ..အစ်မက အချိုအရမ်းကြိုက်တော့ စားလိုက်ဦးမယ်.. 😛
လေးစားပါတယ် ဆရာ.. ဆက်လုပ်…
ဆီးချိုရောဂါအကြောင်းကို လာဖတ်သွားပါတယ်ရှင်. ဗဟုသုတရလို့ကျေးဇူးပါ.